Geoplast ထုတ်ကုန်များ Archives - Eco Plus Trading Co.,Ltd.: Geoplast, Conwood & Leister
၀၉-၇၉၈ ၈၉၀ ၈၀၁၊ ၀၉-၉၇၇ ၀၇၃ ၁၂၃
Eco Plus Trading ကုမ္ပဏီသို့ အီတလီနိုင်ငံရှိ Geo Plast ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသော ပစ္စည်းမှာ ကဏ္ဍ(၃) မျိုးရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ- Wall, Slab, Column တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအစားအားဖြင့် (၄)မျိုးရှိပြီး Geo Tub, GeoTub Panel, Geo Panel, GeoPanel Star တို့ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးနှင့်အားသာချက်များ Geo Plus Formwork ကို ABS System (Acrilon Butadiene Styrene)တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို Plastic သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအခိုင်မာဆုံး Plastic ဖြစ်ပါသည်။ Plastic ၏အပူ ကျုံ့ကြွနှုန်းမှာ (0.05mm)ဖြစ်ပြီး အပူချိန်ခံနိုင်ရည်စွမ်းမှာ 20 to 80C ခံနိုင်ရည် ရှိပါသည်။ ဖိအားအနေဖြင့်လည်း (8.53)psi ခံနိုင်စွမ်းအား ရှိပါသည်။ Geo Plus Formwork ပစ္စည်းများကို အနည်းဆုံးအကြိမ် (100)အထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပစ္စည်းများ ကိုလည်း ပေါ့ပါးစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Plastic Formwork ကိုခွာချလိုက်သည်နှင့် ချောမွေသောမျက်နှာပြင်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ Recyclable အနေဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Formwork တပ်ဆင်ချိန် (၄၅)မိနစ်နှင်. Formwork ခွာချိန် (၁၅)မိနစ်ဝန်းကျင်သာကြာမြင်.ပါသည်။ ။ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် Geo Plast Formwork ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
Geo Tub (Column အဝိုင်း)
Geotub Product ကို Column အ၀ိုင်းများတွင် ကြိမ်ဖန်များစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ထားသော Plastic Formwork ဖြစ်ပါသည်။မှုလအသုံးပြုနေကျ ဖြစ်သော Cardboard နှင့် တခြား products များနှင့်မတူဘဲကွဲလွဲထုတ်လုပ်ထားသော product ဖြစ်သည့်အတွက် ကြိမ်ဖန်များစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊releasing agents များ မပါဝင်ဘဲမြန်မြန် ဆန်ဆန် နှင့် ...
GeoTub Panel (Column လေးထောင့်) (Adjust လုပ်လို့မရ)
GeoTub Panel အချပ်များသည် recycled plastic များဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထား၍ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရသော သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော ကျောက်ပုံးကျောက်ခွက် ဖြစ်ပါသည်။ စတုရန်းနှင့် လေးထောင့်ပုံစံ တိုင်များ ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ABS plastic system ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး စတီနှင့် သက်တမ်းတိုသော သစ် Formwork ...
Geo Panel သည် ကွန်ကရစ်တုံးများ ၊မြေအောက်ခန်းများ၊အုတ်မြစ်ချခြင်းများလုပ်ငန်းနှင့်တိုင်များအတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပြီးအလွယ်တကူနှင့် အလိုအလျေက် တပ်ဆင်ဖြုတ်နိုင် သည့် Plastic Formwork ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိသုံးနေကျဖြစ်သောTimber,Steelများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Geo Panel သည် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုသက်သာ၍ တပ်ဆင်ရာတွင်လည်းလွယ်ကူလှပါသည်။Geo Panel တွင် အရွယ်အစားစုံပါရှိ၍Nylon Handel များအသုံးပြုကာတပ်ဆင်ရပါသည်။ ...
GeoPanel Star (Column လေးထောင့်) (Adjust လုပ်လို့ရ)
Geopanel Star အမည်ရှိ ကျောက်ပုံးပစ္စည်းသည် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရသော Shuttering ပါဝင်သော အချပ်ဖြစ်ပြီး ခံနိုင်ရည်အား မြင့်မားသော ABS Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဤကျောက်ပုံး ပစ္စည်းကို သံကူကွန်ကရစ် တိုင်များ ကြီးမားသော အုတ်မြစ် အဖုံးများနှင့် နံရံများ ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ အချပ်များကို အမျိုးမျိုးသော ...
Geoskyသည် Concrete ကြမ်းခင်းများလောင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော Plastic Formwork အမျိုးအစားပင်ဖြစ်သည်။ Main beam များကိုတွဲလောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် sliding wedge များပါဝင်သောကြောင့် အချိန်စော၍ ခွာနိုင်ပါသည်။ထိုသို့ အချိန်စော ၍ ခွာနိုင်ခြင်းကြောင့်Panel များအားတခြားနေရာတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကျိုးအမြတ်များရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အလေးချိန်အားဖြင့် 11 Kg ...
Geo Plast Accessories
ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည် အီတလီနိုင်ငံရှိGeoPlast Company မှထုတ်လုပ်သော Plastic Formwork များအားဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ...
Geo Panel Art
ABS system ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောGeoPanel Art ဆိုသည့် Product ကို Concrete wall များတွင်အကွက်ဖော်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။GeoPanel ဖြင့်တွဲဆက်အသုံးပြုမည်ဆိုပါကhighproductivity textured concrete wall အဖြစ်ရရှိနိုင်သည့် Formwork အမျိုးအစားပင်ဖြစ်သည်။ထို Product အားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်၊သက်သာ၍ concrete မျက်နှာပြင်တွင်ကျောက်စရစ်တုံးများ မြှပ်၍အလှဆင်ထားသကဲကသို့ရရှိပါသည်။ ...
SkyRail အမည်ရှိ Formwork နည်းပညာတစ်ခုကတော့ အစောင်းများပါသော one-way Slab များ အတွက် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ လူနေအဆောက်အအုံ (သို့) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများမှာ သုံး တတ်ပြီး အကြိမ်အရေအတွက်အားဖြင့် (100)ကြိမ်အထိ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရပါသည်။ SkyRail နည်း ပညာ သည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ...
New Nautilus နည်းပညာသည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော လေဟာနယ်ပါသော ကွန်ကရစ် Slab များကို recycled PP(polypropylene) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါသည်။ Recycled PP ပစ္စည်းကို ဆုံးရှုံးခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Geoplast S.P.A မှ ဖန်တီးပြုလုပ်လိုက်သော ဒီနည်းပညာသည် ခေတ်အမှီဆုံး molding နည်းပညာကို ...
သံကူကွန်ကရစ် နံရံများအတွက် အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော ကျောက်ပုံး ကျောက်ခွက်။ Geopanel အချပ်များ၏ စွယ်စုံးသုံး၍ရသော အကျိူးကျေးဇူးဖြင့် ကျောက်ပုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးအဆောင်များနှင့် နည်းပညာ ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်လာပါသည်။ ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ခွာတဲ့ အခါ မှာလည်း ဘာအလုပ်မှ ပြန်လုပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ပလာစတာ ဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့် ...
လူနေအဆောက်အအုံများ ၊စက်ရုံများနှင့်အခြားသောအဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးအတွက် Concrete ကြမ်းခင်းများလောင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော Plastic Formwork အမျိုးအစားပင်ဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါးတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုမှာ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ ချိတ်ဆက်သည့် two-way ribs အနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ...
ဖုန်း - ၀၉-၇၉၈ ၈၉၀ ၈၀၁၊ ၀၉-၉၇၇ ၀၇၃ ၁၂၃
အမှတ်-၉၄၅ဘီ၊ မေတ္တာလမ်း၊ ကြိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
2020 Copyright © All Rights Reserved. Creative By